I-MOUNTAINliebe, ikhaya leholide e-Valle d'Aosta
Ikhaya leholide elinokubukwa kwe-panoramic!
E-Roisan, ekungeneni kweValpelline naseGran San Bernardo Valleys futhi ngemizuzu emi-5 kuphela ngemoto ukusuka e-Aosta.
Ilungele imindeni nokuhlala isikhathi eside.
Itholakala esitezi sokuqala sendlu yomndeni emibili, endaweni enelanga futhi ethulile.
I-balcony enkulu ye-panoramic ukuze isetshenziswe ngokukhethekile.
Ifulethi elincane elinethezekile elisanda kulungiswa.
Ihlanganiswe negumbi lokuphumula, ikhishi, igumbi lokulala, igumbi lokugezela, lilungele abantu ababili, kodwa, ngenxa yombhede omncane we-sofa (ububanzi: 140 cm) endaweni yokuhlala, ingakwazi ukuhlalisa kahle abantu abangu-1/2 noma izingane ezingu-2.
I-balcony, ithala, ukuzola, umoya omuhle nokubukwa okumangalisayo!
Eduze kwendlu kunezindlela eziningi zokuhamba eziphumulele emvelweni kanye nokuvakasha kwe-MTB.
Idolobha lase-Aosta liqhele ngamakhilomitha ambalwa njengoba kunezintaba ezinhle kakhulu ze-Aosta Valley, okuhlanganisa nelasePila elinendawo yayo yokushushuluza eqhweni noma lezo zeValpelline zasendle.
Indawo yokuhlala iyingxenye yezindlu zomndeni ezimbili, ezisendaweni ethule futhi ene-panoramic kakhulu: uphuze ikhofi kuvulandi noma uphumule ethafeni, ungabuka izintaba ezizungeze i-Aosta (Becca di Nona kanye neMont Emilius, Pila, Grivola kanye noGrand Noumenon, uChaligne noCosta Tardiva).
Yize uhlala esitezi esiphezulu, kungenzeka singabi khona ngaso sonke isikhathi lapho kungena, kulokhu sizokuqondisa ngokuzihlola wena.
Uma uhlala izinsuku ezimbalwa nje kungase kwenzeke ukuthi singahlangani, nokho-ke sizobe sisesandleni sakho ngocingo nganoma yisiphi isidingo.
Kunoma yikuphi, sizobeka konke ukunakekelwa okudingekayo ekulungiseleleni ikhaya lakho leholide ngethemba lokuthi uzozizwa usekhaya ngempela!
Uma uhlala izinsuku ezimbalwa nje kungas…